Ny buffering video dia nohatsaraina ao amin'ny YouTube ho an'ny Android | Androidsis
Raha misy fisehoan-javatra tena miasa izay tsy dia jerentsika loatra amin'ny YouTube ao amin'ny kinova desktop-ny dia ilay fahaiza-mandroso buffering. Io dia ahafahantsika miato ny horonantsary mba hamenoana azy io ary hahafahantsika mamerina azy io tsy misy karazana fanapahana izay mitranga rehefa tsy ampy ny haingam-pandeha ho an'ny playback mitohy. Efa ela no nanana an'ity fampiasa ity ity sehatra video ity, saingy mbola tsy hitanay tao amin'ny fampiharana Android izy io mandraka androany, raha misy mpampiasa maro no milaza fa manana izany izy ireo.
Eny, manery ny fiatoana amin'ny fitaovana Android izahay, ary hanomboka hampidirina buffering mba hiverenana amin'ny playback rehefa hitanay fa efa manana fisintomana ampy ianao hitohizan'ny playback raha tsy misy ireo fanapahana tsy mety manena izay mampihena ny kalitaon'ny traikefan'ny mpampiasa azontsika avy amin'ny YouTube amin'ny finday. Ambonin'izany rehetra izany dia lany izy io raha tsy haingana dia haingana ny fifandraisanay handefa an'io horonantsary io amin'ny HD na Full HD. Ka ndao handray ny antsipiriany kely hahafahantsika milalao ireo horonantsary tsy misy ireo fiatoana tampoka izay manjary mahamenatra.
1 Lalao mitohy
2 Tsy misy fanavaozana avy amin'ny kinova vaovao
Iray amin'ireo fampiharana izay nanovana fanovana bebe kokoa tato ho ato na izay mandoko amin'ny serivisy maro Tahaka ny YouTube Red na YouTube Gaming, izao, noho ny mpampiasa vitsivitsy, fantatray fa hampihatra, avy amin'ny lafin'ny mpizara, ny fampiroboroboana horonantsary amin'ny fitaovana Android.
Amin'izay fotoana izay miato ny horonan-tsary ao amin'ny fampiharana YouTube ho an'ny Android, sosona vaovao no hampiseho ny fandrosoana buffering eo ambanin'ny bokotra filalaovana. Mampiseho ny haben'ny horonantsary aza izy io ary firy ny megabytes efa alaina. Ity fampiasa ity dia tsy hita afa-tsy amin'ny horonan-tsary fa tsy amin'ireo fotoana fanaovana dokambarotra ankahalain'ny olona.
Rehefa buffering tohizo mandra-pahatapitry ny fisintomana vita, misy hafatra hiseho fa miova ho "vonona hilalao". Fanovana tena nilaina tamin'ny fihetsika teo aloha tamin'ny alàlan'ity fampiharana ity izay nanao buffering kely hijanonana vetivety, izay midika fa ny olona iray dia tokony hijanona isaky ny roa isaky ny telo mba hampidirina ao ambadika ary ny playback dia tsy mikorontana loatra .
Tsy misy fanavaozana avy amin'ny kinova vaovao
Ity endri-javatra vaovao ity tsy mila ny fanavaozana ny app YouTube, satria ireo mpampiasa izay mitatitra izany dia avy amin'ny kinova samihafa toy ny 10.37.58 na 10.43.60. Noho izany, raha te hanandrana ianao, satria eo alohan'ny fampiharana tianao indrindra hidirana amin'ny karazana fantsona sy lohahevitra horonan-tsary ianao dia manana faharetana kely satria ho avy ny zava-drehetra.
Iray hafa izay marihina fa mampiditra YouTube fanatsarana miharihary amin'ny fampiharana YouTube anao, na dia mampiavaka ny serivisy manokana toa an'ireo roa voalaza ao amin'ny YouTube Gaming sy YouTube Red. Serivisy roa hanandrana hanasarotra ny sehatra an-tserasera amin'ny fandefasana lalao an-tserasera toa ny Twitch, na ny NetFlix mihitsy ho an'ny andian-tantara amin'ny TV sy atiny amin'ny Internet amin'ny endrika sarimihetsika.
Tsy tokony hanadino koa isika YouTube Music, iray amin'ireo fahagagana mahafinaritra amin'ity taona ity izay mamela antsika esory ny doka amin'ny horonan-tsary ary miditra amin'ny atiny mozika rehetra izay ankafizin'ity sehatra lehibe ity. Fanavaozana ny endrika sy ny zava-baovao rehetra manampy YouTube izay sarotra kokoa ny mandray ny gadona, ary manontany tena ny olona indraindray raha toa ka tsy hiaraka amin'ny tany am-boalohany izay rehetra misy azy ireo izao amin'ny farany YouTube Gaming, YouTube Red ary Mozika YouTube.
Aza adino izany ny fampiasa vaovao dia haparitaka amin'ny dingana, noho izany faharetana kely hahalalanao ny lanjan'ilay horonan-tsary hilalaovanao na inona no ilàna izany buffering video izany amin'ny fotoana sasany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Manomboka mampiseho fandrosoana miompana amin'ireo horonan-tsary niato ny YouTube
Erica dia hoy izy:
Tatitra tsara, arahaba tsara, ahoana no fomba hampiasana ny buffer? Nanana aho, saingy i Hayer dia nakariko ccleaner, ary mieritreritra aho fa mamafa azy na mahita azy .. ampio aho azafady, io no ampiasaiko betsaka. MISAOTRA
Valio i Erica
CCleaner dia tsy afaka mamafa ny buffer na dia afaka mamafa ny cache misy anao aza izy io. Tsy azonao ilay safidy rehefa milalao horonantsary ianao?
Nanana ny buffer aho fa tsy mivoaka intsony, ampio aho izay kinova manana buffer hampidina azy
Dropbox sy Facebook dia nametraka ny fanidiana farany ny maro amin'ireo fampiharana azy ireo: Mailbox, Carousel, Slingshot ary maro hafa